ပညာရေးအလုပ်အကိုင်တွေ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ပညာရေးသင်ယူမှုကိုဆိုလိုသည်. သငျသညျပညာရေးအလုပ်အကိုင်မှာအလုပ်မလုပ်သည့်အခါ, သငျသညျကလူတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်လေ့လာသင်ယူကူညီပေးပါမည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ကလေးများအားလုံးကျောင်းသွားရရှိရမည်. ဒါကြောင့်ကျောင်းစနစ်ကြီးမားသည်, နှင့်ဖြည့်စွက်ဖို့အများကြီးပညာရေးအလုပ်အကိုင်ရှိပါတယ်. အများအပြားတက္ကသိုလ်များလည်းရှိပါတယ်, ကောလိပ်များ, နှင့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ. ပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်ဤကမ်းလှမ်းမှုအလုပ်အကိုင်အားလုံး.
သငျသညျတခုပညာရေးအလုပ်အကိုင်ရလိုလျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်ပေးချင်တယ်. သင်ဤစာမကျြနှာကိုဆင်းဝေးကွာနေတဲ့ဆရာဖြစ်လာမှခြေလှမ်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်. သို့သော်ကျောင်းစာသင်ခန်းထက်ကျော်လွန်သည်အခြားပညာရေးအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်. ဤတွင်သူတို့ထဲကတချို့တွေဟာ - သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဒီဂရီလိုအပ်:
စာကြည့်တိုက်မှူး - ကောလိပ်များအတွက်စာကြည့်တိုက်, ကျောင်းများနှင့်အခြားစာကြည့်တိုက်စာအုပ်များစုစည်း, ဂျာနယ်များ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများ, နှင့်ကွန်ပျူတာဒေတာ. ဤသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့ခစျြတဲ့သူလူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
လမ်းညွှန်မှုတိုင်ပင် - ကျောင်းလမ်းညွှန်မှုတိုင်ပင်ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ပညာရှင်များနှင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်နေဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေကူညီပေးသည်. ကူညီပေးနေလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်သင်ပေးချင်ကြပါဘူးသူကလူတို့အဘို့ကြီးစွာသောအလုပ်.
School တွင်ဆက်ဆံရေးရုံး - ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိမိဘများစောင့်ရှောက်, ကျောင်းသားများအတွက်, နှင့်ဆရာချိတ်ဆက်နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းကကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ပါလိမ့်မယ်. ကျောင်းဆက်ဆံရေးရုံးဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
ESL ဆရာမ - ESL "ဟုဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား" အတိုကောက်. တစ်ဦး ESL ဆရာဇာတိပီမဟုတ်သောကျောင်းသားများကိုအင်္ဂလိပ်သွန်သင်.
လက်ထောက်ဆုံးမဩဝါဒပေး - ထို့အပြင်ဆရာရဲ့လက်ထောက်ကိုခေါ်, တစ်သင်ကြားရေးလက်ထောက်စာသင်ခန်းနှင့်ထောက်ခံမှုကျောင်းသားများကိုအတွက်ဆရာ, ဆရာမကူညီပေးသည်. တစ်ဒီဂရီမပါဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ကောင်းသောအလုပ်. တစ်သင်ကြားရေးလက်ထောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
အစားထိုးဆရာမ - တစ်ဦးကအစားထိုးဆရာမပျက်ကွက်သူသည်ဆရာများအတွက်အတွက်ခြေလှမ်း. သငျသညျဆရာလက်မှတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသို့မဟုတ်သင်တဦးတည်းအလုပ်ဖို့အချိန်ပြည့်ကတိကဝတ်ချင်ကြဘူးလျှင်ဒါဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအတိုအသိပေးစာမှာအလုပျလုပျဖို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်မည်.
အနုပညာဆရာမ - အနုပညာဆရာ, ဆရာမတိုင်းအဆင့်မှာအနုပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အနုပညာသမိုင်းတွင်သင်ပေး. သူတို့ကကျောင်းသားများကိုအနုပညာစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြကူညီပေးရန်. သငျသညျအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ကိုယ့်အနုပညာကတဆင့်တစ်ဦးလူနေမှုဝင်ငွေမနိုင်လျှင်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
ကောလိပ်ပါမောက္ခ - ကောလိပ်ပါမောက္ခဒီဂရီဝင်ငွေနေသောကျောင်းသားများကိုသင်ပေး. ဤကွီးစှာသောအသိပညာရှိပြီးသူတို့ရဲ့လယ်ပြင်၌အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအလုပ်, အရာနည်းပညာရှေးဂရိနိုင်ငံမှတစုံတခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျမဟုတ်ဘဲအများပြည်သူကျောင်းမှာပုံမှန်ဆရာဖြစ်ပါ့? ဒါဟာညာဘက်လူတစ်ဦးအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆရာ, ဆရာမတစ်ဦးရှားပါးမှုရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်အလွယ်တကူအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ပညာရေး၏လယ်သည်အရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်၏တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်အထောက်အကူပြုချင်တယ်ဆိုရင်ပညာရေးအလုပ်အကိုင်ကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုများမှာ. သို့သော်အနည်းငယ်ပညာရေးအလုပ်အကိုင်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်အကိုင်အဖြစ်ပေးဆောင်နေကြ. ပိုက်ဆံအများကြီးလုပ် အကယ်. ရန်အရေးကြီးပါသည်, ထို့နောက်ပညာရေးသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုမဖွစျစခွေငျးငှါ.
အဆိုပါဗီဒီယိုအားမန်ဒီ Manning features, တစ်နှစ်တာ၏အမျိုးသားဆရာ 2018
သင်တစ်ဦးသည်ကျောင်းဆရာဖြစ်လိုလျှင်, start ရန်နေရာကောင်းသင့်ရဲ့ပြည်နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်. ပြည်နယ်ဆရာ, ဆရာမအတည်ပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်, သည်ပြည်နယ်များ '' လိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားခြားနားကြသည်.
သငျသညျနုပျိုကလေးများသင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်, အစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးအတွက်ဒီဂရီကောင်းလှ၏. သငျသညျအဟောင်းများကိုလေးတွေသင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျသင်ပေးချင်သောအရာကိုဘာသာရပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား – ဥပမာ, သင်္ချာ - နှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဒီဂရီဖွစျလိမျ့မညျ.
သင်တစ်ဦးဆရာဖြစ်လာမတိုင်မီအများစုမှာပြည်နယ်များကျောင်းသားတစ်ဦးကိုဆရာဖြစ်ရန်သင့်အားလိုအပ်. သငျသညျတစျဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုပညာသင်ကာလအဘို့သင့်အနီးရှိကျောင်းဆုံးမဩဝါဒ ပေး. လေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်.
အများစုမှာပြည်နယ်ဆရာ, ဆရာမများအတွက် Praxis စာမေးပွဲရန်သင့်အားလိုအပ်
သငျသညျရုံးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက, သင်တစ်ဦးဒီဂရီစရာမလိုဘဲတစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်ရုံးအတွက်ပညာရေးအလုပ်အကိုင်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. နောက်ပိုင်းတွင်, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးကူညီရန်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တချို့လေ့ကျင့်ရေးရနိုင်. ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့သငျ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုထားပါ – အသစ်ရောက်ရှိလာသောမှအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ရန်. သင်တစ်ဦး ELS လက်မှတ်အလုပ် paid ကိုရှာဖွေရနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏ဒေသခံပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာမှာလုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်. ESL အွန်လိုင်းသင်တန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ
တစ်ဦးတိုင်ပင်ဖြစ်လာ - အကြံအစည်ကို၏အသိအမှတ်ပြုဘို့ကောင်စီနှင့်ဆက်စပ်ပညာရေးအစီအစဉ်များ (CACREP) ကျောင်းကတိုင်ပင်မှူးမတ် certifies. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးမအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါနှငျ့သငျအနီးတစ်အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကိုရှာဖွေ
Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်အထူးပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာကိုင်ဆောင်သူ (SIVs) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
Learnersegdeinc.com ပိုပြီးအထောက်အထားများရရှိလိုသူအရည်အချင်းပြည့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက် website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အသုံး teach.org ဆရာဖြစ်လာမှခြေလှမ်းများနှင့်အတူကူညီပေးဖို့
သင်တစ်ဦးဒီဂရီရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, သင်ဆဲတစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တက်အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ
ပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာပါ
Spotlight: Eklas Ahmed က, လက်ပံအတွက်ဆရာဖွစျလာသူဆူဒန်ကနေဒုက္ခသည်တစ်ဦး, မိန်း - Eklas တစ်အံ့သြစရာအံ့သြစရာခံယူစောင့်ကြည့်!